Maxaa ka jira in xarunta Midowga Afrika laga wareejinayo Magaalada Addis Aabba? (Qoraal) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaa ka jira in xarunta Midowga Afrika laga wareejinayo Magaalada Addis Aabba? (Qoraal)
Waxaa si weyn u baahay war ku saabsan in xarunta Midowga Afrika laga wareejinayo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kadib colaadaha ka taagan dalkaasi.
Qoraal kasoo baxay Afhayeenka Guddoomiyaha Midwoga Afrika Ebba Kolando ayaa lagu beeniyay wararka sheegaya in Guddoomiyaha Middowga Afrika uu amray in xarumaha Midowga Afrika laga rarro magaalada Adis ababa.
Warqad loo ekeysiiyay inuu saxiixay Guddoomiyaha AU Moussa Faki ayaa lagu sheegay in si KMG ah shaqaalaha iyo hayadda Midowga Afrika looga wareejinayo magaalada Addis Ababa, arrintaas oo been abuur uu ku tilmaamay afhayeenka Guddoomiyaha.
Arrintan ayaa timid iyadoo kooxaha fallaagada TPLF iyo OLF ay ku hanjabeen inay weerar ku gelayana magaalada Addis ababa, taasoo ay meesha ka saartay.
Previous articleMacalin Maxamud: “Ahlu Suna Guriceel way u dhowdahay, ciddii nasoo weerartana waan iska celineynaa”
Next articleWasiirka Waxbarashada oo baabi’iyey Kharashaad uu soo rogay maamulka G/Banaadir (Akhriso Qoraal culus)